Vaovao - Inona no marika malaza indrindra eto an-kalamanjana?
Arc 'Teryx （Canada): ny marika ambony ivelany any Canada, natsangana tao VANCOUVER, Canada tamin'ny 1989, ny foibeny, studio famoronana, ary ny tsipika famokarana lehibe dia mbola ao Vancouver ihany. Noho ny fikatsahany asa tanana vaovao sy ny haitao vaovao, tao anatin'ny folo taona mahery, dia nanjary marika amerikana avaratra fanta-daza ary na dia eran'izao tontolo izao aza, miaraka amina vokatra tsara eo amin'ny sehatry ny akanjo sy kitapom-batsy. Ny vokatra dia tafiditra indrindra amin'ny fitsangantsanganana, fiakarana ary fanatanjahan-tena amin'ny ranomandry sy lanezy, kitapom-batsy, akanjo, fifantohana amin'ny antsipiriany.
Big Pack (Alemana): kitapo fatoriana kitapo.
Columbia (Etazonia): ny marika ivelany voalohany any Etazonia, palitao, satroka orana, pataloha sy kojakoja ivelany, mpamaky rivotra, T-shirt, lobaka, pataloha miasa, kitapom-batsy, kiraro ary akanjo fanaovana ski, sns.
Jack Wolf Skin (Alemana): ny marika ivelany voalohany. Kitapom-batsy, kiraro ivelany, tranolay, kitapo fatoriana, akanjo sy kojakoja isan-karazany, sns.
Lafuma (France): kitapom-batsy marika frantsay malaza, kiraro ivelany, tranolay, kitapo fatoriana, fitafiana sy kojakoja fitsangatsanganana isan-karazany, kojakoja fitobiana sns.
LL Bean (USA): mivarotra vokatra fialam-boly isan-karazany, ary koa fitaovana any ivelany. Ny vokatra rehetra dia amidy amin'ny alàlan'ny mailaka sy ny varotra mivantana an-tserasera, tsy misy agents.
Marmot (Etazonia): ny fitafiana amin'ny lanezy, ny kitapo fatoriana ary ny tranoben'ny tendrontany Alpine dia malaza amin'ireo mpankafy tendrombohitra.
Mountain Hardware (Etazonia): akanjo ivelany, tranolay, ny antsipiriany tsara indrindra, ny mpitarika ny akanjo ivelany.
Patagonia (Etazonia): PATAGONIA dia iray amin'ireo marika akanjo ivelany lehibe indrindra any Etazonia sy Eropa, ary manana fivarotana franchise maro karazana erak'izao tontolo izao. Mahalana ny fihenam-bidy i PATAGONIA, izay nanampy azy hanangana sary avo lenta. Ny vokatra Patagonia dia malaza eran'izao tontolo izao amin'ny fifantohana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny harena. Ny foto-kevitry ny famolavolana an'i Patagonia ary mitaky fitakiana kalitao dia nahatonga ny vokany nahazo loka marobe tamin'ny fanombanana fitaovana haino aman-jery ivelany maro, ary naoty ho iray amin'ireo marika ankafizin'ny mpankafy ivelany. Ny fanapahana ny akanjony dia tsara kokoa noho ny vokatra ivelany, ary tsara koa ny antsipiriany. Ny vokatra volon'ondry azy dia malaza be.
Vaude (Alemana): ny vokatra dia ahitana saika ny vokatra ivelany rehetra. Mikasika ny fitafiana dia manana ny fitaovany manana patanty manokana izy io.
The North Face (USA): maharitra ny vokatra, ary nifindra tamin'ny vokatra avo lenta ka hatramin'ny vokatra malaza.
T'tiss (, Alemana): T-shirt, lobaka, palitao, pataloha mahazatra, sns.